फिल्म निर्माण र अभिनयमा श्वेताको विश्राम ! « Ramailo छ
फिल्म निर्माण र अभिनयमा श्वेताको विश्राम !
फिल्म निर्माण र अभिनयबाट श्वेता खड्काले केही समय बिश्राम लिने भएकी छिन् । माझी बस्ती निर्माण र ईन्टेरियारमा व्यस्त हुँदा श्वेताले फिल्मलाई समय दिन नभ्याउने भएकी हुन् ।
‘जसरी भएपनि दुई महिनामा माझी बस्ती बनाइसक्नु पर्नेछ’, श्वेताले सुनाइन्, ‘कान्छीको रिलिज र बजेट अभावले बस्ती बनिरहेको थिएन । अब चाहिं जोडतोडले लागिरहेको छु ।’ फिल्मले गर्दा रोकिएको ईन्टेरियरको काम पनि सुरु गरेको श्वेताले सुरु गरेकी छन् । ‘अब दुई दुई वटा काम लिएपछि फिल्म त गर्नै पाइएन नि’, श्वेताले भनिन् । फिल्मबाट कति समयका लागि श्वेताले लेलिन् त विश्राम ? श्वेतासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
‘सबै काम सक्दा त एक वर्ष नै लाग्छ होला । त्यसपछि चाहिं फिल्मबारे सोच्ने फुर्सद होला’, उनले भनिन् । तर यो विचमा उनले नयाँ फिल्मको कथा चयन र टिम भने बनाउँनेछिन् । ‘कोहिनूर’ पछि गत साल श्वेता ‘कान्छी’ मार्फत कमब्याक भएकी थिइन्, जुन फिल्मबाट उनलाई सफलता हात पर्यो ।